पोखरा ५ का असिना प्रभावित १ सय ९६ जना कृषकहरुलाई राहत प्रदान : भिडियो रिपोर्ट सहित - Googlepokhara
पोखरा ५ का असिना प्रभावित १ सय ९६ जना कृषकहरुलाई राहत प्रदान : भिडियो रिपोर्ट सहित
googlepokhara	प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख ३१, २०७६ समय: १४:१२:१९
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ५ ले असिना पानीबाट पिडित कृषकहरुलाई राहत प्रदान गरेको छ । दुईसाता अघि परेको भारी असिना पानीका कारण तरकारी बालीमा अनपेक्षित क्षेति ब्यहोरेका वडा नं. ५ का झण्डै २ सय कृषकहरुलाई क्षेतिको अनुमान गरि वडाले राहत प्रदान गरेको वडा अध्यक्ष धन बहादुर नेपालीले बताए । वडा स्तरीय बजेट मार्फत पिडित कृषकहरुलाई ६ लाख बराबरको राहत प्रदान गरिएको अध्यक्ष नेपालीले जानकारी दिए ।
पोखरा महानगरपालिकाको वडा नं. ५ लाई कृषी वडाका रुपमा लिने गरिन्छ । यस वडाको मालेपाटन क्षेत्र पोखरा बजारलाई बेला बखतमा ताजा तरकारीको स्वाद चखाउने क्षेत्र पनि हो । सारमा पोखरा ताजा तरकारी उत्पादनको उर्वर भुमि हो । तर, प्रायजसो क्षेणिक र अनुमान गरिए भन्दा भिन्न प्रकृतिको वर्षात हुने पोखरामा कृषकहरुको मेहनत र जागँर पनि कहिले काही वर्षातसंगै बगेरै जाने गर्दछ । गएको वैशाख १६ गते साँझपख परेको असिना पानीले सयौ कृषकहरु निकै मारमा परे । तर, निरन्तर क्षेति ब्यहोरि रहेका कृषकहरुले पहिलो पटक स्थानिय सरकारको तर्फबाट राहत प्राप्त गरेकोमा पिडित कृषक तिल कुमारी कोईराला व्यक्त गरिन् ।
असिना पानीका कारण विक्षिप्त बनेका १ सय ९६ जना कृषकहरुलाई वडा कार्यालयले विभिन्न तिन समुहमा वर्गिकरण गरि बिउ पुँजिका रुपमा सानो रकम राहत प्रदान गरेको जनाएको छ । तिन रोपनी क्षेत्रफलमा क्षेति ब्यहोरेका ७५ जना कृषकहरुलाई नगद रु.१५\_१५ सय, ३ देखी ५ रोपनी सम्म क्षेति ब्यहोरेका ५९ जना कृषकहरुलाई नगद रु.२५/२५ सय र ५ रोपनी भन्दा धेरै क्षेत्रफलको तरकारी बालिमा क्षेति ब्यहोरेका ६० जना कृषकहरुलाई नगद रु.४\_४ हजार रुपैयाँ राहत प्रदान गरेको हो । प्राकृतिक विपत्तिका कारण बालि नष्ट भएपनि धर्यताको बाँध जोगाई राख्नु पर्नेमा पिडित कृषक सन्त प्रसाद कोईरालाको भनाई छ ।
वडा नं. ५ को मालेपाटन क्षेत्रमा कृषकहरुले ठुलो मात्रामा खेति गर्ने गरेका छन् । असिना पानीका कारण अघिल्लो साता मात्रै ५ करोड भन्दा धेरैको क्षेति भएको अनुमान गरिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । असिना पानीका कारण कृषक जिवनाथ पराजुलि जस्तै अधिकांस कृषकहरुले वर्षभरिको आम्दानी गुुमाएका छन् ।
तर, स्थानिय सरकार कृषकरुहको साथमा रहेको अधिकारीहरुले साम्त्वना दिएका छन् । यस्ता प्रकारका विपत्तिहरुलाई कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसकिने बताएका उनिहरुले कृषी तथा बालि बिमामा कृषकहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राज्यको कृषी नीतिलाई समायानुकुल बनाउदै कृषकहरुको उत्साह र हौषलालाई थप बढाउनु पर्नेमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष धन बहादुर नेपालीले जोड दिएका छन् ।
तर, प्राकृतिक विपत्तिका कारण हुने क्षेतिको परिपुर्ति र कृषकहरुको मनोबल उच्च राख्नका लागी कृषी विमा मै प्रभावकारी हुनेमा सरोकारवालाहरुको जोड छ । पोखरा र आसपासको क्षेत्रमा बढि पानी पर्ने भएका कारण पनि यो जरुरी रहेको उनिहरुको तर्क छ ।